अनौठो गाउँ, जहाँ रक्सीको नाम लिँदा कडा कारवाही हुन्छ ! Canada Nepal
अनौठो गाउँ, जहाँ रक्सीको नाम लिँदा कडा कारवाही हुन्छ !
काठमाडौं । धुमपान र मद्यपान गर्नु हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने थाहा हुँदा पनि धेरैले सेवन गर्ने गर्छन् ।
पेयपदार्थको बट्टामा यो हाम्रो शरिरको लागि हानिकारक छ भनि लेखिएको हुन्छ । तर मानिसहरुले त्यसको प्रवाह नै नगरी पिउने गर्छन् ।
हाम्रो देशमा यसको सेवन नगर्न जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु गरिरहने गरिन्छ । तर मानिसहरुले सेवन गर्न छाडेका छैनन् ।
भारतमा पनि यसको सेवन गर्ने गरिन्छ । तर भारतकै एक यस्तो ठाउँ पनि छ, जहाँ रक्सी सेवन गरेमा कारवाही गर्ने गरिन्छ । प्रतापगढ नजिकको ‘टाँडा’ नामको गाउँमा रक्सी पिउनु त टाढैको कुरा रक्सीको नाम पनि लिन पाइदैन ।
यस गाउँमा रक्सीको नाम लिनु नै पाप मानिन्छ । २ हजार जनसँख्या रहेको यस गाउँमा वर्षौदेखि रक्सीको नाम लिइएको छैन ।
लबाना समुदायका मानिसहरु बस्ने त्यो गाउँमा रक्सी पिएमा बेचेमा पनि कारवाही गर्ने गरिन्छ । त्यु गाउँमा यस्तो नियम पञ्चायतले २० वर्ष अगाडि राखिएको थियो ।
मंसिर १४, २०७७ आइतवार २१:१९:३७ बजे : प्रकाशित